Inkampani ibikho ukusukela 1963 kwaye ngoku uzuze udumo olukhulu phakathi koluntu ngokubanzi. Ngenxa yokwanda kokuthandwa kwayo, Inkampani ine ngaphezulu kwe 1.000 abasebenzi kunye nangaphezulu 500.000 abasebenzisi abasebenzayo.
Nangona amava osisityebi, uphawu lufumaneka eSpain kwinyanga ephelileyo. Kwilizwe lethu, kuvunywe liCandelo eliBanzi loNgcakazo (OTHIXO) sisiphelo sedatha, ke siyathemba ukhuseleko lweqonga. Imidlalo yaseSpain eyithandayo kwaye imnandi ngakumbi eParis kunokubona kwangaphambili inokuhlengahlengisa i-Euro. Kwindlela nganye, Ukhetho lwezehlo kunye nokhuphiswano zibanzi kakhulu kunesilinganiso.
Inkampani yase Scandinavia, ukuba ungabona isiqingatha senkulungwane yembali, Ingenye yeyona Paris idumileyo neyimpumelelo, indawo yaseSpain ayinakuphoswa.. Ekuhlaziyeni kwethu, sibona i-betsson.es eyahlukileyo yolonwabo kunye nokunyusa okulungiselelwe kuthi. Yonke imibuzo efanelekileyo malunga namava ezemidlalo kwi-intanethi kwiParis iphendulwa apha ngezantsi.
Inkokheli yeBetsson kwihlabathi liphela kwezemidlalo eParis igqibe kwelokuba ingene kwimarike yePeru 2008 kwezemidlalo ukubheja kwezemidlalo kwi-intanethi kuqhume iPeru eParis, intandokazi eParis.
Iya kuba sePeru ngaphezulu kweshumi leminyaka, Iinombolo kwaye zikwazile ukuhlala phakathi kwabadlali ababheja ababalaseleyo ababonelela ngeyona misebenzi mihle kunye nokuphakanyiswa, iibhonasi kwaye zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zemidlalo ye-yekhasino ekwi-intanethi, njengamawakawaka ezithuba zentengiso, mnyama kunye roulette bukhoma.
uhlaziyo lweveki Betsson yekhasino inikezela ukukhushulwa kunye nokubheja kwezemidlalo.
I-Betsson ihlala inikezela ngokunyusa okukhulu kubadlali abatsha kwaye ihlala ikhona kuyo yonke imidiya, kubandakanya amaphephandaba, unomathotholo, umabonwakude, ukongeza ekubeni athi igama lakhe lingumdlali weqela elidlulileyo kunye nekhola yebhola ekhatywayo uNolberto Solano njengozakuzaku wePeru.
iindlela zokunikezela ezemidlalo zibonelela: ukhetho lwezemidlalo kunye neendidi zeparis
Bacacelwe ukuba “umdlalo omtsha oza kutshintsha indlela yokubona umdlalo eSpain” kwaye inyani kukuba awuyi kufumana ndawo kwikhathalogu elingaphezulu kwe 4.000 iimarike. Ukubheja umdlalo owuthandayo awuzange ube lula kwaye ulula! Kodwa ayisiyo yonke imidlalo yeParis, apha singabheja kwezopolitiko, Umabonwakude kunye nemidlalo bhanyabhanya okanye imicimbi edumileyo (njenge-Eurovision, njengoko kuchaziwe apha ngasentla).
Ngaphezulu koku 40 ezemidlalo, ibhola ekhatywayo inomsebenzi ocacileyo, edla ngokwenzeka kwi-portal yamaqela. Kwaye ukuba uluntu lufuna ibhola ekhatywayo, Ukhetho olwahlukileyo oh! Kumdlalo wokuqala wesahluko, Ngokwesiqhelo, zingaphezulu kwekhulu iingqikelelo ezahlukeneyo zomsitho.. Kuxhomekeke kwisiphumo senani leentlungu onokuthi uziphumeze kufutshane 200 iintlobo zeparis.
Malunga nokuhanjiswa komxholo kwikona ephezulu ngasekhohlo, kukhangelwa umcimbi. Ngokukwazi ukuhlala eParis ngexesha lomdlalo, okanye iziganeko zobomi emva kokufa okanye ngaphambi kokuba iParis ityhhile ngaphambi komdlalo.
Kwikholamu elilandelayo kwiimodeli zothotho kwaye ukuba ucofa kuyo, uya kubona enye ikholamu yoluhlu lweemarike kuyo. Okokugqibela, kwicala lasekunene lesikrini, kukho isigqebhezana, kunye nokukhethwa okuphawuliwe kunye nenani leParis.
Iphinde yafundwa, apha unokwenza uqikelelo malunga nemidlalo: ibhola ekhatywayo, Ibasketball, ivolleyball, umkhenkce omkhenkce, ibaseball, Ifomula 1, igalufa, tennis, ibhola yesandla kunye nokunye. I-Paris yeyona ligi iyithandayo kwihlabathi njengeChampaign, I-Champions League, I-Premier League, I-NBA… Y, kunjalo, isenzo sokuhlala eParis, njengoko kucwangcisiwe. Jonga ngezantsi kumfo waseParis eBetsson, nganye nganye.
Betsson inika abasebenzisi abatsha ithuba lokuphinda kabini idiphozithi yabo yokuqala ukuya kuthi ga kwi-S / 300 I $ 100 (Iibhonasi ezikhethekileyo zabadlali abasuka ePeru), ngokusekwe kuninzi lwetanki yesibini, Ukubonelela ngemidlalo yasimahla enokusetyenziselwa ukubheja ngebhola ebalaseleyo, Imidlalo yeTennis kunye neligi ngaphezu komdlalo owuthandayo.
Ukuvula ikhonkco kufuneka ube une-S ephantsi / 30 I 10 $, ukusebenzisa enye yeendlela zokuhlawula, IPagoEffective PagoDirecto, I-MasterCard kunye neVisa.
Kucetyiswa ukuba ibhonasi yenziwe yenziwe ngaphambi kokubheja, Sukugcina kwakhona ukuze wenze ukuba ufumane ibhonasi.
Ukuze ulungele ibhonasi kufuneka udlale imali yebhonasi eceleni kwaye udlale imidlalo yokubheja kwezemidlalo, Iinkqubo zokungcakaza zaseParis kunye ne-POS ayikuvumeli ukubhengezwa kwebhonasi. Ukuba uthatha isigqibo sokurhoxisa kunye neemeko zokufumana kunye nebhonasi iya kuncitshiswa kwaye izibonelelo zepremiyamu kunye nedipozithi zisetyenziswe ngokuchaseneyo..
Enye into eyimfuneko yimali yebhonasi izihlandlo ezithandathu, ukuzala, umzekelo, ukuba inqanaba lokudibanisa / 20 yamkela i-S / 20 x 6 = S / 120 isebenza, Eli nani ngoku kufuneka likhethe i-steeper 50 Ibhonasi kaJanuwari inokubanga ekugqibeleni.
Zonke ezi meko kufuneka zifezekiswe ngaphakathi 30 kwiintsuku ngaphambi kokuba urhoxiswe. Ukuba emva kwexesha elithile imali eseleyo yebhonasi iya kusala ishiyekile.
Ukusuka kwi-paris, kubandakanya ubomi ngexesha lokuxabana (iinjongo, amakhadi, njl.), ngobuninzi bokucwangcisa imicimbi ebalulekileyo. Njengothelekiso olukhawulezayo phakathi kweeseti ezimbini (amakhadi, iikona, uhlaselo olubi, isithuba esisegoli, njl.).
Kwicala lasekunene lomfanekiso kubonisa imimandla yeziganeko ezifanelekileyo njengokuhlaselwa, kodwa ubungqina abuloncedo kakhulu.
Xa unxweme lungena embindini ngexesha elifanelekileyo njengoko umdlalo uqhubeka. Lilonke, Eli candelo aliqinisekisi abanye kuphela; kuthelekiswa nabantu abakhuphisana nabo, Akukho lwazi lwaneleyo apha.
KuWilliam Hill ngokwakhe, Betfair y Bwin, Unokulandela usasazo olubukhoma lwezehlo ezithile ngomfanekiso weTV.